मतदाता शिक्षा प्रभावकारी बनाउन आयोगले के गरिरहेको छ ?
Fri, Jun 22, 2018 | 01:17:56 NST
18:20 PM ( 1 year ago )
काठमाडौं, असार ५ – असार १४ गते हुने स्थानीय तहको दोस्रो चरणको चुनावका लागि मनोनय दर्तासँगै प्रचारप्रसार तीव्र रुपमा भइरहेको छ । उम्मेद्वाहरुले मतदतातको घर आँगन, मेलापात, चौतारी सबै ठाउँमा पुगेर आफूलाई मत दिन आग्रह गरिरहेका छन् ।
असार १४ गते १, ५ र ७ नम्बर प्रदेशका तीन सय ३४ वटा स्थानीय तहमा चुनाव हुँदैछ । उम्मेदवारले आफूलाई भोट दिन आग्रह गरे पनि कसरी मतदान गर्ने भन्ने चाहिँ नसिकाएको मतदाताको गुनासो छ ।
कसरी बदर नहुने गरी भोट हाल्ने भन्ने सिकाउने दायित्व निर्वाचन आयोग र राजनीतिक दलको हो । दलहरुले स्थानीय कार्यकर्तामार्फत आफ्ना मतदातालाई भोट हाल्न सिकाइ रहेका छन् निर्वाचन आयोगले पनि ठूलो लगानीमा मतदाता शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको छ । पहिलो चरणमा मतदाता शिक्षा सोचेअनुसार प्रभावकारी नभएको निष्कर्ष निकाल्दै आयोगले दोस्रो चरणका लागि मतदाता शिक्षा प्रभावकारी बनाउन लागि सचिव गोपीनाथ मैनाली बताउनुहुन्छ । स्थानीय चुनावमा एउटै मतपत्रमा सात ठाउँमा छाप लगाउनु पर्ने भएकाले मतदाता धेरै झुक्किएका छन्।
पहिलो चरणमा मत बदरको अवस्था
वैशाख ३१ गते भएको पहिलो चरणको स्थानीय तहको चुनावमा मतपत्र कम बदर भएको आयोगको भनाइ छ । मतदाता शिक्षा सम्बन्धी कार्यक्रमको जिम्मा पाउनुभएका सहसचिव नवराज ढकालका अनुसार ग्रामिण क्षेत्रमा भन्दा शहरी इलाकामा मतपत्र धेरै बदर भएको छ । उहाँका अनुसार पहिलो चरणमा २ देखि ३ प्रतिशत मात्र पूर्ण रुपमा मत बदर भएको छ । ‘हामी पहिलो चरणमा कति मत बदर भयो भन्ने यकिन विवरण निकालिरहेका छौं । समग्रमा २ देखि ३ प्रतिशत मात्र मत बदर भएको हाम्रो प्रारम्भिक अनुमान छ′ ढकालले उज्यालो अनलाइनसँग भन्नुभयो, ‘शहरी क्षेत्रमा भन्दा ग्रामीण क्षेत्रमा कम मत बदर भएको छ ।’ जिल्लामा १ देखि २ प्रतिशत मात्र मत बदर भएको उहाँको भनाइ छ ।
काठमाडौं महानगरपालिकामा मेयर र उपमेयर पदमा सबैभन्दा धेरै मत बदर भएको छ । काठमाडौं महानगरमा १ लाख ९७ हजार २ सय २१ मत खसेकोमा ६ हजार १ सय ८३ मत बदर भएको थियो ।
मतदाता शिक्षा कार्यकर्तालाई कडाइ
निर्वाचन आयोगले दोस्रो चरणमा खटिएका मतदाता शिक्षा कार्यकतामाथि कडाइ गरेको छ । एउटा मतदान केन्द्रमा एक जनाका दरले खटिएका कार्यकर्तालाई आयोगले प्रत्येक मतदाताको घर घरमा पुग्न निर्देशन दिएको छ । दोस्रो चरणमा आठ हजार तीन सय ६४ मतदानकेन्द्र कायम भएकाले त्यति नै संख्यामा मतदाता कार्यकर्ता परिचालन गरिएको छ । घरमा पुगेको प्रमाणित गर्न आयोगले घरमुली वा परिवारका अरु सदस्यको हस्ताक्षर गराएर ल्याउन भनेको छ । आफू पुगेर मत दिन सिकाएको घरको परिवारका सदस्यको हस्ताक्षर नभए पारिश्रमिक भुक्तानीमा कडाइ गर्ने आयोगको तयारी छ । आयोगले छुट्टै संयन्त्रमार्फत पनि अनुमगन गरिरहेको सहसचिव ढकालको दाबी छ ।
पछिल्ला तीन दिन मतदान केन्द्रमै सिकाइने
निर्वाचन आयोगले असार १४ गते हुने मतदानका लागि असार ११, १२ र १३ गते प्रत्येक मतदान केन्द्रमै मतदाना शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै छ । ती तीन दिनमा मतदाता परिचयपत्र वितरणका साथै मतदान अधिकृत, मतदाता शिक्षा कार्यकर्ता र अरु कर्मचारी विशेष रुपमा मतदान गर्ने तरिका सिकाउँदै छन् । पहिलो चरणमा नमुन मतपत्रमा भोट हाल्ने तरिका सिकाए पनि यसपटक सक्कली मतपत्र नै देखाइने सचिव मैनालीले जानकारी दिनुभयो । त्यसरी मतदान केन्द्रमा आएर शिक्षा लिएका मतदाताको एकीन विवरण राख्न पनि आयोगको निर्देशन छ ।
स्थानीय भाषामा सामाग्री
निर्वाचन आयोगले मतदाता शिक्षा कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउन स्थानीय १६ किसिमका भाषामा निर्वाचन सम्बन्धी सामाग्री अधिकतम रुपमा वितरण भइरहेको जनाएको छ । भोजपुरी, मैथली, थारु, तामाङ, नेवारी, डोटेली, मगर, अवधी, लिम्बु जस्ता भाषामा छापिएका मतदाता शिक्षासँग सम्बन्धित सामाग्री मतदाताको घर घरमा पुर्‍याइरहेको छ । यस्ता सामाग्री दलहरुले मागे जति उपलब्ध गराइएको आयोगको भनाइ छ ।
सञ्चारमाध्यमाबाट पनि उत्तिकै प्रचार
निर्वाचन आयोगले मतदाता शिक्षा कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउन सार्वजनिक सञ्चारका माध्यमबाट पनि प्रचारप्रसार तीव्र बनाइ रहेको छ । सेलिब्रेटीहरुलाई प्रयोग गरेर आयोगले किन मतदान गर्ने ? कसरी गर्ने ? लोभ प्रलोभनमा परेर नभइ आफ्नै स्वविवेकले मतदान गर्नुपर्छ भन्ने शिक्षा रेडियो, टिभी जस्ता माध्यमबाट दिइरहेको छ ।
मतदाता शिक्षा प्रभावकारी बनाउन आयोगले नमुना मतदान गराउन मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयलाई निर्देशन दिएको छ । दोस्रो चरणमा चुनाव हुने ३५ मध्ये २७ जिल्लामा एनजिओको सहकार्यमा नमुना मतदान गराउन आयोगले आर्थिक स्रोत पठाएको सहसचिव ढकालले जानकारी दिनुभयो ।